Miyuu SEM iyo SEO labadaba lagama maarmaan u yihiin ganacsiga yaryar?
Ka hor inta aanad fahmin sida SEM iyo SEO ay u caawiyaan horumarinta ganacsiga yaryar, waxaan doonayaa inaan bilaabo aasaaska aasaasiga ah. Aan aragno qeexdooyinka ugu caansan ee labadaba.
Ugu horreyntii, Suuqda Search Engine (SEM) ayaa sidoo kale loo yaqaan 'Search Search' si ay u noqoto qayb muhiim ah oo ku jirta joogitaanka internetka ee farsamada mashruuc kasta oo casri ah. SEM badanaa waxaa ka mid ah xayeysiis PPC ah oo si toos ah u soo bandhigay liiska natiijooyinka natiijada baaritaanka raadinta (SERPs), sidoo kale inta kale ee xayeysiisyada bixisay, oo ka muuqata meelo kale duwan bogagga kale ee bogagga kale ee dib-u-celinta. Waxa ay ka shaqeysaa fudud - ma jirto qiimo go'an mudada xayeysiiska, mar kasta oo ad u heshay riix kaaga isticmaalaha isticmaala dhamaantood waxaad u baahan tahay inaad bixiso - all sure llc. Farsamooyinka labaad ee muhiimka ah waa Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO), kaas oo daboolaya ficil faahfaahsan oo ficil ah si aad u hesho darajada sare ee bogga SERPs. Inta badan, SEO wuxuu ku siinayaa caawimo loogu talagalay darajada ganacsiga yaryar oo loo marayo shaqooyinka asaasiga ah ee goobta (sida content iyo hagaajinta moodeelka), iyo hawlaha goobta shaqada oo badanaa la xidhiidha geedi socodka dhismaha ee tayada. Xaqiiqdii, halkan ma heli kartid wax kobcis ah oo lagu bixiyo si aad u kordhisid liiskaaga caadiga ah. Dabcan, codsashada caawinaad SEO ah ee ganacsiga yar yar ee ganacsiga, ama mashruuc kasta oo internetka ah oo aan la iloobin baaxadda, waxaa badanaa lagu soo oogay hay'adda iyada oo la eegayo miisaanka shaqada ee loo baahan yahay kiis kasta.
Sidaa daraadeed, aan dib ugu laabanno meesha ugu muhiimsan. Anigu waxaan doonayaa inaan wax walba iska caddeeyo - labadaba SEM iyo SEO labadaba waa mawduucyada ugu muhiimsan ee shabakada internetka ee guulaha ganacsiga. Labadaba iyaga ayaa loo baahan yahay si loo hagaajiyo muuqaalka internetka ee ganacsiga, oo keenaya natiijooyinka raadinta ugu sareysa iyo shirkadda horay loo dhigo dhagaystayaasha yoolalka ballaadhan. Habkaas, macaamiisha badan ee suuragal ah waxay u badan tahay inay u arkaan talada ay bixisay Google (ama Bing sidoo kale) oo sii wado booqashada bogga ganacsigaaga. Dabcan, Suuq-geynta Shirkadda Search-ka iyo Mashruuca Raadinta Shirkadda ayaa loo baahan yahay horumarka ugu sarreeya, mid kastoo ka mid ah ayaa muujinaya dhinacyadiisa ugu xoogan inta lagu jiro wajiyada kala duwan ee safarka adag ee guusha. Laakiin jawaabtan gaaban, waxaan jeclaan lahaa inaan bixiyo dareen gaar ah gaar ahaan sida ay SEO ugu caawin karto ganacsiga yaryar.
Ugu horreyntii, waxaad ka heli kartaa adeegyada raadinta raadinta oo gebi ahaanba la awoodi karo xaalad kasta, waxay ku habboonaan karaan inay ku dhowaadaan miisaaniyadda suuq geynta. Kadib dhan, waxaad sidoo kale samayn kartaa shaqooyin badan oo SEO ah oo asaasi ah. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad xakameyso raadinta habboon ee DIY ee bixinta natiijooyinka dhabta ah waa inaad leedahay bog internet oo dhameystiran, iyada oo aanad bixin lacagta (SEM). Keliya diyaar u ah inaad maal gashato wakhti yar si aad u hesho aqoon ku filan oo loo baahan yahay si loo hagaajiyo content boggaaga, dhisida xiriir wanaagsan oo gudaha ah, hagaajinta xawaaraha xawaaraha boggaaga iwm. Xitaa iyada oo miisaaniyadda suuq-geynta suuqa, waxaad xor u tahay inaad sare u qaaddo darajadaada SEO, gaar ahaan natiijooyinka raadinta maxaliga ah, iyo helitaanka fursado ay ku soo booqdaan dadka saxda ah.